Waxyaabaha kalifa in gabadha nacdo Kulanka Sariirta (Dareen Cajiib ah) - iftineducation.com
Waxyaabaha kalifa in gabadha nacdo Kulanka Sariirta (Dareen Cajiib ah)
aadan21 / March 1, 2017
iftineducation.com – Waxaa jira waxyaabo jir ahaan iyo nafsiyan gabadha ku kalifi kara in ay iska nacdo oo ka niyad jabto Kulanka sariirta oo ay lumiso baahida galmada.
Xilliga Uurka ama Dhalmada waxaa jirka haweenka ku dhaca is badalo hormoone ah oo xitaa nafsiyan ah waxaana kala duwanaasho uu ku dhacaa rabitaankeeda galmo iyadoo uu hoos u dhaco illaa ay umusha ka baxdo .
Haddii Ay Jiraan Mushaakil Qoyska ah : tani saameyn ayay ku yeelataa balse ninka waa ku duwan yahay iyadoo uu awoodo in ka dib marka uu dood uu la galo lamaantiisa oo uu sariirta tago in uu raboonayo galmada .
Culeyskeeda oo kordha iyana xishood ayay ku keeneysa oo dhanka ciyaarta ah iyada oo ka baqeysa in ninka ay kala kulanto dhaleeceyn, macaanka sameynta ciyaarta ee haweeneyda waxa ay ku xeran tahay oo ay imaaneysaa marka ay dareento raali ahaansho iyo ku qanacsanaan dhanka ninkeeda ah kaasi oo sinaya kalsooni .
dumarka oo ciyaarta nuucaan xiiseya